जन्मदै दुवै आँखा नभएका रमेश प्रसाईको यस्तो छ जिवन कहानी, आमा भन्छिन्, ‘छिमेकीले नै वि’ष खुवाएर मारिदेउ भन्थे’ (भिडियो हेर्नुस्) – Wow Sansar
रमेशलाई हिन्दी फिल्म निकै मन पर्छ । सुरुमा त रमेशले पढ्न सक्दैन भनेर विद्यालय पनि पठाएका थिएनन् । तर पछि रमेशले आफुलाई नदेख्ने भएर हेपेको भनेर कर गरेपछि मात्र उनलाई विद्यालय भर्ना गरिदिएका थिए । उनी विद्यालयमा भर्ना
भएपछि उनले विलक्षण प्रतिभा देखाएका थिए ।
Prevचितवनमा गैँडाले लखेटी लखेटी लियो मायाको ज्या’न,५ जना साथिले भागेर ज्या’न बचाउँदा माया सधैका लागि अस्ताइन !
Nextजय पाथिभरा माता सबैको कल्याण गर्नुहोस ! भगवानको शक्ति छ यो ठाउमा , १० बर्ष देखी पालेको रोग चवाटटै भयो (भिडियो सहित)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1319)